ARK: mutambo wevhidhiyo unogashira kuwedzerwa muna Zvita | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe ukatitevera, zvirokwazvo iwe unotoziva kuti chii chaNoah, mutambo wevhidhiyo wekupona wakanangana nenyika iyo iwe uchafanirwa kuzvidzivirira uye kukwiza mafudzi nema dinosaurs. Chinyorwa chikuru chinowanikwa muchitoro Steam yeLinux, uye kuti nekuwedzera kutsva kuchaona mwenje munguva pfupi, sekuisa kwandakaita mumusoro kunouya muna Zvita. Iko kuwedzera kutsva kunodaidzwa ARK: Kupona Kwakashanduka. Kunyanya muna Zvita 12 tichava nenhau huru idzi kune vese vateveri avo vatove kunakirwa nemutambo nezvazvino zvirimo.
Senguva dzose, Steam inopa ayo madhoraParizvino unogona kuwana zita rine 50% dhisikaundi kana isina kuchinjwa panguva yekuverenga chinyorwa ichi. Saka pachinzvimbo che50 euros, iyo inowanzo mutengo, ikozvino unogona kuiwana kungodarika € 24. Uye nekuwedzera ichave inonakidza mutambo wevhidhiyo kupfuura iyo yakajairwa, nekuti inowedzera mepu nyowani uye nezvishamiso zvakawanda.
Pindai nhau Zvinonyanya kuzivikanwa ndezve matani uye matani ezvinhu zvitsva zviripo, zvisikwa zvitsva zvaunosangana nazvo mukutsvaga kwako, matambudziko matsva ezvakatipoteredza, nezvimwe zvakawanda. Ichokwadi ndechekuti isu tichafanirwa kuve nemoyo murefu uye kumirira, nekuti mushanduro yapfuura mutambo weLinux unosiyana zvishoma nezvatinoona muWindows vhezheni zvinoenderana nevamwe vashandisi vakanyunyuta nezve izvi. Saka ndinovimba kuti nekuwedzera uku zvese izvo zvinoshanduka uye zvirimo papuratifomu yedu zvakanaka chaizvo.
Pamwe vagadziri vachiri kufanira polish ARK yeLinux uye inoda imwe nguva yekuvandudza. Ivo vari zvakare kufunga nezveVulkan yeramangwana, izvo zvakanaka kwazvo. Asi panguva ino haina kukwana, asi izita rakanakisa uye riine theme yemafashoni, senge kupona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » ARK: mutambo wevhidhiyo unogashira kuwedzerwa muna Zvita
Atari inogadzira joystick yeGnu / Linux